RF Soldering Dunhu Bhodhi | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
Induction RF Soldering Circuit Board neHigh Frequency Soldering Heater
Chinangwa Pisai dunhu redunhu gungano kuenda ku600ºF (315.5ºC) kune solder RF zvinongedzo kune yakawanda radar.
Chinyorwa Kovar chinobatanidza 0.100 ”(2.54mm) yakafara x 0.200” (5.08mm) yakareba, redunhu bhodhi uye solder peta
Kupisa 600ºF (315.5ºC)
Zvishandiso • DW-UHF-2 kW kupisa induction sisitimu, yakagadzirirwa neiri kure musoro webasa rine imwe 1.2μF capacitor
Maitiro A maviri anotenderera helical coil anoshandiswa kupisa kereke. Solder paste inoiswa munzvimbo yemubatanidzwa, zvinongedzo zvinoiswa munzvimbo yakakodzera uye kupisa kunoiswa kwemasekondi gumi, kugadzira
the solder paste to flow.
• Inosika mvura uye gas-tight joint joint nokukurumidza
• Kunyatso shandisa kupisa pasina kukanganisa dzimwe nzvimbo dzebhodhi
Categories Technologies Tags Dunhu reBhodi, electric board, High frequency RF Soldering Circuit Board, induction soldering board, RF Soldering Circuit Board
Induction Soldering Circuit Board NeGBT Kutsigira
Chinangwa Kupisa post, lead kana lead-yemahara solder preforms kune akasiyana wedunhu bhodhi soldering mafomu.
Machira Kumusoro uye ezasi emabhodhi edunhu, madiki uye makuru lead kana lead yemahara preforms.
Kupisa <700 ºF (371ºC) zvinoenderana neyakafanotaurwa
Frequency Three dzoka coil 364 kHz
Zviduku zviviri coil turn 400 kHz
Makuru maviri mairi coil 350 kHz
Maitiro matatu matatu emamwe ma coils anoshandiswa kupisa nzvimbo dzakasiyana siyana padunhu redunhu zvichienderana kana nzvimbo yacho iri imwechete application kana yeboka application. Nguva yacho inosiyana kubva pamasekonzi 1.8 kusvika 7.5 zvichienderana nenzvimbo. Mukugadzira izvo zviteshi zvinopisa uye makoiri anoendeswa mune chinzvimbo pamusoro pepositi kuitira otomatiki zvinangwa. Chero inotungamira kana tungamira yemahara solder preforms anoshandiswa. Iyo nguva yekuita pane inotungamira yemahara solder yakati rebei zvishoma.
• Kupisa kusingabatsiri maoko kusingabatanidzi hunyanzvi hwekugadzira, kunozvipa kune zvakanaka otomatiki.
• Solder inotungamirirwa ne preforms, hapana zvakasara zvakasara pabhodhi.
• Yakanaka solder kuyerera pasina pamusoro pekupisa bhodhi uye kukuvadza ari padyo masekete uye zvikamu.
Categories Technologies Tags Dunhu reBhodi, High frequency Soldering Circuit Board, RF Soldering Circuit Board, Kugadzirisa Dunhu reBhodi